एक कन्फ्युज कसरी लेख्ने? यो के हो, यसको मतलब के हो? Tdk - How Writing.Info
कुनै अनौंठो कसरी लेख्ने
असुरक्षा, शुद्ध हिज्जे
प्रत्येक शब्दसँग सही हिज्जे नियम हुन्छ। वास्तवमा, हामीले शब्दहरूको सही र राम्रो प्रयोगको लागि हिज्जे नियमहरूमा ध्यान दिनु पर्दछ परीक्षाको तयारीको सर्तमा मात्र यो विषयको व्यवहार गर्नु भन्दा। यस समर्थन साइटमा हाम्रो उद्देश्य, जुन कसरी लेख्ने भन्ने नाराका साथ स्थापित गरिएको थियो, हाम्रो भाषालाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न मद्दतको लागि मात्र हो। तपाईं हाम्रो सही हिज्जे समुदायमा कसरी सामिल हुन सक्नुहुन्छ लेख्न सक्नुहुन्छ। सही शब्दहरू प्रयोग गरेर तपाईं आफ्नो वातावरणमा उदाहरण सेट गर्न सक्नुहुनेछ।
विद्यार्थीहरू बाहेक, त्यहाँ धेरै गलत हिज्जेहरू छन् जुन वयस्कहरूले गर्छन्। ती मध्ये एक शब्द (पथ) हो। यो गलत हिज्जे अक्सर एक अज्ञात गल्ती हो। हामी सबैले यो हाम्रो दिमागको कुनामा जोड्न सक्छौं, सडक र यातायातको बारेमा शब्द र अभिव्यक्तिहरू छुट्टै लेख्नुपर्दछ। उदाहरणको लागि (सडक, समुद्री मार्ग)। सडक प्रत्ययको साथ शब्दहरू लेख्दा श्रोतबाट जानकारी प्राप्त गर्दा हामीलाई हाम्रो लेखहरू सहि लेख्न सहयोग पुर्‍याउँछ।
मन नमान्नुहोस्, यसको मतलब के हो?
एक कन्फ्युज कसरी लेख्ने?
आपत्ति नमान्नुहोस्, हिज्जे गाईड
जब शीर्ष समाप्त हुन्छ